Machị 2022 - Blog Blog
Ọnwa: March 2022
Echiche imegharị ụlọ ịsa ahụ mara mma nke 35 na echiche ọkụ maka ụdị ọ bụla
By Victoria Akpan TMLT March 31, 2022 si ebi ndụ, Ịzụ ahịa 0 Comments
- Echiche ndozi ime ụlọ ịsa ahụ - Chọta echiche maka enyo, ọkụ, ihe efu, ịsa ahụ na tub iji nyere gị aka ịgbanwe mpaghara gị. Echiche imegharị ụlọ ịsa ahụ pụrụ iche nke a pụrụ iche ga-akpali gị ndozigharị ọzọ. Ọgụgụ obi ụtọ. Ụlọ ịsa ahụ, nke a na-akpọkarị ụlọ ịsa ahụ,...
Ndị 35 kacha mma na-ahụ maka onwe ha nke na-agaghị adị, mgbe ọ bụla
By Victoria Akpan TMLT March 31, 2022 si ebi ndụ, ngwaahịa, Ịzụ ahịa 0 Comments
- Best Self-tanners - Na-achọ ndị kasị mma onwe-tanners na-enye gị a eke eke? Anyị nwere ndị na-asa ahụ́ onwe ha adịghị ọnụ na post a nke ga-ahapụ gị ka anwụ na-esusu gị na enweghị ahịrị. Ị ka nwere ndoputa? Kedu otu esi etinye ude mmiri n'onwe ya? Gụkwuo na...
Igwe Nebulizer: nkọwa, ụdị, ojiji na nhicha
By Victoria Akpan TMLT March 31, 2022 Health, ngwaahịa 0 Comments
– Igwe Nebulizer – Mụta ka esi eji ngwa na-agbanwe ọgwụ mmiri mmiri ka ọ bụrụ obere alụlụ. Chọrọ ịmatakwu maka igwe nebulizer? Enwere ike ịchọta azịza nke ajụjụ ọchụchọ gị n'isiokwu a. Otú ọ dị, Nebulizer ...
The Top 25 chest Workouts maka ndị ikom maka ike na udi
By Victoria Akpan TMLT March 31, 2022 Health, si ebi ndụ 0 Comments
- mgbatị obi - Site na ịpị otu ụkwụ, ị nwere ike mepụta nnukwu igbe n'ime ụbọchị ole na ole. Mmega ahụ obi bụ ihe na-adịghị amasị ọtụtụ ụmụ nwoke ime. Akụkọ a ga-akọwa ihe kpatara ịchọrọ mgbatị ahụ iji wuo gị ...
Otu esi esi nri nri kacha dị nro na nke kacha dị nro
By Na -agba egwu March 31, 2022 Food, si ebi ndụ 0 Comments
- Pot Roast - Ochie Sunday Pot Roast bụ nri abalị na-akasi obi na-akasi obi nke nwere ike inye ezinụlọ niile nri ngwa ngwa. Anyị nwere ike ime efere a na oven, na ngwa ngwa esi nri, ma ọ bụ na ngwa ngwa ngwa ngwa. Ọ dịghị ihe ọzọ...
Ị nwere akpụkpọ ụkwụ dị elu n'apata? Nke a bụ ka esi eji ejiji ha ọdịda a
By Na -agba egwu March 30, 2022 si ebi ndụ, ngwaahịa, Ịzụ ahịa 0 Comments
- Akpụkpọ ụkwụ dị elu nke apata ụkwụ - akpụkpọ ụkwụ dị elu bụ akpụkpọ ụkwụ na-agbatị n'elu ikpere ruo ma ọ dịkarịa ala etiti apata ụkwụ. A makwaara ha dị ka akpụkpọ ụkwụ ogologo apata ụkwụ ma ọ bụ naanị akpụkpọ ụkwụ apata ụkwụ. A na-eji ihe dị iche iche eme akpụkpọ ụkwụ apata ụkwụ, gụnyere akpụkpọ anụ, sịntetik ...
Ihe kacha mma maka ụmụ nwanyị na ụdị ejiji kacha mma maka ụmụ nwanyị karịrị afọ 50
- N'elu maka ụmụ nwanyị - N'elu maka ụmụ nwanyị bụ uwe na-ekpuchi ma ọ dịkarịa ala obi ma na-ekpuchi ọtụtụ n'ime ahụ mmadụ elu n'etiti olu na n'úkwù. N'okpuru elu nwere ike ịdị mkpụmkpụ ...
Ụlọ oriri na ọṅụṅụ 20-Star Luxury kacha elu na San Miguel de Allende
By Na -agba egwu March 30, 2022 blog, Travel 0 Comments
San Miguel De Allende- San Miguel de Allende bụ ebe dị ịtụnanya onye ọ bụla ga-achọ ịga. Enwere ọtụtụ ihe omume ọchị ga-ahapụ ebe nchekwa na-adịgide adịgide. N'isiokwu a, anyị ga-edepụta ụfọdụ okomoko kacha mma ...
Ihe egwu dị egwu ime na nwanne gị nwanyị nke na-arụ ọrụ n'ezie
By Na -agba egwu March 30, 2022 blog 0 Comments
- Pranks ime na nwanne gị nwanyị - Ịnọ n'ụlọ na-eme ihe ọ bụla mgbe ụfọdụ nwere ike ịgwụ gị ike, mana itinye obere egwu egwu nwere ike ime ka ọ dị ndụ. Ndị a nwere ike ịbụ ihe ọchị ma ọ bụ njakịrị ndị nwere ike ime ka mmadụ niile chịa ọchị. Na...
Na-arụ ọrụ n'ụgbọ mmiri ụgbọ mmiri: Gagharịa n'ụwa wee kwụọ ụgwọ
- Na-arụ ọrụ na ụgbọ mmiri ụgbọ mmiri - Ọ bụ nrọ gị ịrụ ọrụ n'ụgbọ mmiri ma ị nweghị echiche nke otu esi eme ya? Ọ dịghị mkpa ka ị na-echegbu onwe gị ọzọ n'ihi na, n'isiokwu a, anyị nwere ...
Onyinye obere azụmaahịa $10 000
Onyinye maka obere azụmaahịa
Daalụ n'ụbọchị ncheta
Okwu mkpali maka ụmụ nwanyị
Mụbaa mmefu ndị metụtara azụmahịa gị